Fanavaozana ny rafi-panabeazana :: Hotohizana hatrany indray ny fanadinana CEPE • AoRaha
Fanavaozana ny rafi-panabeazana Hotohizana hatrany indray ny fanadinana CEPE
Toy ny lelon-jaza, mandroso sy mihemotra. Fantatra fa tsy hofoanana indray ny fanadinam-panjakana CEPE amin’ny taom-pianarana manaraka na dia efa voafa­ritra ao anatin’ny fampiharana ny Teti-pivoarana ho an’ny fanabeazana na PSE aza. Hisy fanavaozana hafa ihany koa hoampiharina amin’io Teti-pivoarana io.
«Efa tapaky ny governemanta fa sivy taona ihany ny ambaratonga voalohany fa saingy misy hatrany ny fana­dinana CEPE. Tsy misy
fiovana ihany koa ny tetiandrom-pampianarana fa mitazona an’izany isika. Roa taona izao no nahafahana nanao ny fampiharana, izay hahafahana manao tomban’ ezaka ny zavatra natao sy ny nisy ary ny mbola hatao », hoy Rejo-Fienena Félicitée Madeleine, minisitry mpisolo toerana amin’ny Fanabeazam-pirenena, ny Fanofanana ara-teknika sy araka asa, nandri­tra ny atrikasa fanaovana tombana ny PSE, teny amin’ny Carlton Anosy, omaly.
Ao anatin’ny telo andro ny hanatanterahana an’ity atrikasa ity handraisan’ireo mpisehatra amin’ny fanabe­azana miankina amin’ny
fanjakana na tsia sy ny fiarahamonim-pirenena ary ny mpiaramiombon’antoka ara-bola sy ara-teknika anjara ity.
Fangatahan’ny ray aman-dreny
Marihina fa fangatahan’ ny ray aman-drenin’ny mpianatra no nitazonana ny fanadinana CEPE. « Amin’ny lafiny iray, mety amiko ny mbola hisian’ny CEPE satria mba misy ny dingana ataon’ny ankizy fa kosa mila omena lanja io diplaoma io fa manjary lasa fandaniana andro fotsiny ihany », hoy ny fanehoan-kevitry ny renim-pianakaviana, Raharimanana Mariette.
Tsiahivana kosa fa efa nikisaka isan-taona, nanomboka tamin’ny taom-piana­rana 2017-2018, ny fidiran’ ny taom-pianarana vaovao. Ho an’ity taom-pianarana 2018-2019 ity, ohatra, dia ny volana aogositra vao hifarana ny taom-pianarana ka ny volana novambra indray no fanombohan’ny manaraka. Mety hisy ny fikorontanan’ny fampianarana raha hiverina amin’ny tetiandrom-pampianarana teo aloha indray.
« Efa naneho ny hevitra sy nanolotra volavolan-kevitra izahay sekoly katolika. Miandrandra zavatra izahay amin’ ity tombana ity », hoy indray Andrianantoanina Guy Noël, tale Diosezianin’ny fampianarana katolika eto Antananarivo.
Fifidianana ben’ny tanana :: Nametraka fepetra maro amin’ny Ceni ireo vondrona mpanara-maso